နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းတွင် ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဝင်ကူးခတ်ရန်၊ ကိုယ်တိုင်ဝင်လှော်ရန်လိုအ - Yangon Media Group
နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းတွင် ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဝင်ကူးခတ်ရန်၊ ကိုယ်တိုင်ဝင်လှော်ရန်လိုအ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၇- နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းတွင် ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် ဝင်ကူးခတ်ရန်၊ ကိုယ် တိုင်ဝင်လှော်ရန်လိုအပ်ပြီး ထိုမှ သာ ဒီမိုကရေစီအမြစ်တွယ်ပြီး ဒီ မိုကရေစီအသီးအပွင့်တွေ ပွင့်မည် ဟု NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောသည်။
မတ် ၁၇ ရက်တွင် ကယား ပြည်နယ်မှ ပြည်သူများ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသို့ တတိယအကြိမ်အဖြစ် ပါတီဝင်အ ဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား ကို ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဘုရားဖြူ ကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ဝင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် က ယင်းသို့တက်ရောက်ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး မှာ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် သာရှိသေးကြောင်း၊ ပန်းတိုင်းမရောက် သေးချိန်၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော် လွှားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူ့အား လိုကြောင်း ဒေါက်တာဇော်မြင့် မောင်က ပြောသည်။
“”ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ ဘယ်အရာမှ မအောင်မြင်နိုင် ဘူး။ ပြည်သူများထောက်ခံရန်လို သလို ပြည်သူတွေဟာ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဝင် ပါဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဝင်ကူးခတ် ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်တိုင်လှော်ဖို့လို တယ်။ ဒါမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက် နေတဲ့ အခြေအနေကနေ ဒီမိုကရေ စီအမြစ်တွယ်ပြီး ဒီမိုကရေစီအသီး အပွင့်တွေပွင့်မယ်””ဟု ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်က ဆိုသည်။ပြည်သူများသည် အရှင်သခင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူဟာအဖိနှိပ်ခံ မဟုတ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ပြည်သူ သာ နိုင်ငံရေးကိုလုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ နောက်ကပြည်သူများ လိုက်ရန် လိုကြောင်းလည်း ၄င်းက ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးသည် ကြောက်စရာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအ တွက် ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ရန် တာဝန် ရှိကြောင်း၊ မည်သည့် ပါတီဝင်အ ဖြစ်လုပ်ရမည်ကိုမူ ခေါင်းဆောင် ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပေါ် ချစ်စိတ်၊ ပြည်သူပေါ်ချစ်စိတ်၊ ဦး ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ခေါင်းဆောင် နောက်ကိုလိုက်မှသာ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို ရောက်မည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် သည် အဆိုပါအရည်အချင်းများ ရှိသည်ကို ငြင်းချက်ထုတ်စရာ မလို ကြောင်းလည်းဆိုသည်။
“”အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့အရေး တော်ပုံက ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ ပါတီ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ကြ တယ်။ တကယ်လည်းဆောင်ရွက် ခဲ့ကြလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်ဝင်တော်တော်များများ ဘဝ တွေပျက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဘဝ ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အ တွက်၊ လူထုအတွက်၊ တိုင်းရင်းသား တွေအတွက် ပျက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် အကျယ်ချဲ့စရာမရှိပါ ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပန်းတိုင်းမရောက်သေး တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခဲနက် ပြည်သူ အားလုံး ပါတီထဲဝင်လုပ်ဖို့လိုအပ် ပါသေးတယ်””ဟု ဒေါက်တာဇော် မြင့်မောင်က ထပ်လောင်းဆိုသည်။
ယခုပါတီဝင်အဖြစ် အဆိုပြု လွှာပေးအပ်ပွဲတွင် ဘုရားဖြူကျေး ရွာအုပ်စုဝင် ကျေးရွာသုံးရွာမှရွာ လုံးကျွတ်နီးပါး ပါတီဝင်ရောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၀ဝ၉ ဦးရှိသည်။အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် NLD ပါတီမှ ဦးဖိုးခွားက””ရွာသုံးရွာလုံးက တစ်ချိန်တုန်းက စည်းရုံးရေးဆင်းရတာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေပါ။ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲတယ်။ ကုန်း လမ်းပဲရှိတယ်။ အခုလိုအင်တိုက် အားတိုက် ပါတီဝင်ကျတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်””ဟု ပြော သည်။
သင်္ကြန်ကာလ ငှက်လှေစီးသူများ ဘေးကင်းစေရန်နှင့် ငှက်လှေ ပိုမိုကြံ့ခိုင်စေရန် တောင်သမန်အင်းရ?
ဟာဇက်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ကို ဟာနန်ဒက်ဇ် စိုးရိမ်ခြင်း မရှိ
နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ ရငွေ ကျဆင်းနေ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ကိုလျှော့ချပြီး တာ??
လူမှုကွန်ရက်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် လွဲမှားစွာသုံးနှုန်းနေသော မြန်မာစာအသုံးအနှုန်းများက မြန်မာစာ??
ကာစီနိုများကို နယ်စပ်မြို့များ၌ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါက
အာဖဂန်နစ္စတန် ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဇာမေခါလီဇတ် ကို ဝါရှင်တန်၌ အာဖဂန်ရေးရာ အကြံ?